धेरै बर्षपछि जुर्यो यस्तो दुर्लभ संयोग : जान्नुहोस् आजको शुभ–अशुभ समय, राहुकाल र अभिजित मुहूर्त
काठमाडौ । सामान्यतया कुनै काम गर्नु अघि, काम सुरु गर्न उपयुक्त समय देख्नुपर्छ ताकि काममा कुनै बाधा नहोस । यदि तपाइँ पनि आइतबार (आज) कुनैं शुभ कार्य गर्ने योजना बनाईरहनु भएको छ भने , आज हामी यहाँ तपाईंको शुभ समयको बारेमा चर्चा गर्नेछौं जसले तपाईको कामलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछ । उपयुक्त समय हेरेर काम गर्दा तपाईको काममा कुनैं पनि बाँधा आउँने छैन । तपाईले आफ्नो काममा सहजैं सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । आउँनुहोस जानौं आजको दिनको बारेमा।।।।
आजको ग्रहनक्षत्रः आज मिती २१ असोज २०७५ अर्थात ७ अक्टोबर २०१८, दिन आइतबार, महिना असोज, तिथि कृष्णा त्रयोदशी दिउँसो १ः५७ सम्म, योग शुक्ला बेलुका ८ः१४ सम्म, करान वाराणज दिउँसो १ः४७ , भद्रा राती १२ः३२ सम्म, नक्षत्र, पुर्वाफाल्गुनी दिउँसो ३ः३ सम्म, सूर्योदय आज विहान ५ः५१ मा भएको छ भने सूर्यास्त बेलुका ५ः२१ मा हुनेछ ।
चंद्र राशि कन्या र चंद्रोदय बिहान ४ः३२ बजे भयो । आजको शुभ समय, अभिजित मुर्हत दिउँसो २ः३९ देखि लिएर ४ः७ मिनेटसम्म रहेको छ भने, राहुकाल ४ः१५ देखि ५ः४५ सम्म हुनेछ राहुकालको समयमा कुनैं पनि काम थालनि गर्दा राम्रो हुँदैन । यो योग निक्कै दुर्लभ संयोग मानिन्छ । बर्षौपछि फेरी यो योग बनेको छ । राहुकाल बाहेकको समय कुनै नयाँ काम थाले उक्त काम औधि राम्रो हुने मान्यता ज्योतिषशास्त्रमा छ ।
यस्ता अद्भूत दश गुण तथा बिशेषताहरु भएका हुन्छन् सोमबार जन्म हुने ब्यक्ति
मानाङको डम्पीङसाइड समेत बोतलले भरिँदै
आज १०० बर्षपछिको यस्तो दुर्लभ संयोगको दिन : जान्नुहोस् कस्तो छ !
कुनै कुनै फोटा देख्दा हेरिरहन मन लाग्छ, दिमाग होइन सिधै दिल मा अट्याग गर्छ !
आज यसकारण अद्भुत दिन, अलौकित ग्रहको दुर्लभ मिलन [२०७५ श्रावण १०]
जान्नुहोस् सारा नेपाली र नेपालका लागि आजको दिन कस्तो छ ? तिथी–मिती, ब्रत, साईत, पर्व समेत जानकारी सेयर गरौँ
आजको जनबोली प्रश्न: सामुहिक बलात्कारसँगै यस्तो अवस्था बनाउने बलात्कारीलाई कस्तो कार्बाही हुनुपर्छ ?
एकैपटक चारवटा बच्चा जन्माउने झापा धुलाबारीकी २६ बर्षीय दिपा भट्टराईलाई के भन्नुहुन्छ ? सेयर गर्दिनुहोला
शेरबहादुरको भाईरल बनेको प्रशंसा ! कत्तिको पच्छ पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोस् ?
आजको जनबोली : काठमाडौको यो तस्विरलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?